China Wholesale yepamusoro yepamusoro yakajeka sleeve t hembe Yakachena Ruvara 100% donje t-shirts vagadziri uye vanotengesa | RE-HUO
Yepamusoro yepamusoro yepamusoro yakajeka sleeve t-shirt Yakachena Ruvara 100% donje t-shirts
Chigadzirwa Chigadzirwa: donje t hembe
Zvinhu: 180gsm 100% donje
Technics: Screen yekudhinda, Kupisa kupisa, machira nezvimwe
Ruvara: Dema / chena / grey / denga rebhuruu / tsvuku / yero / orenji
Saizi: XS / S / M / L / XL / 2XL
1.In wemari ruvara.
Nekuti mumatanda mavara, yedu MOQ ndeye makumi mashanu zvidimbu t-shati mune yega ruvara, uye iwe unogona kusarudza akawanda masize.
2.Fabric fekitori kuverenga
Iyo fekitori yemachira yatinobatirana nayo ine yejira yekuverenga ye128 mavara, iyo MOQ yechikamu ichi chejira ndeye 200 zvidimbu t shati paruvara, iyo yekugadzira kutenderera ndeye 3-5 mazuva akareba kupfuura iyo fekitori stock machira t shirt, anotevera ari mavara aripo.
Kana izvo zvataurwa pamusoro zvisina ruvara rwaunoda, isu zvakare takagadzira machira masevhisi, isu tinogona kugadzirisa machira zvinoenderana nezvaunoda, iwe unongoda chete kupa iyo Pantone ruvara rwejira, kana kutumira chidimbu chejira kumafekitori edu.
Iyi ndiyo saizi chati yeUnited States, isu tinopawo yakagadzirirwa saizi masevhisi, iwe unogona kutitumira yako saizi chati kana kutitumira pahembe, mugadziri wedu anozozvigadzirisa zvinoenderana nezvaunoda.
Isu zvakare tine anotevera akagadziriswa masevhisi.
Tine screen silk kudhinda, dhayi sublimation kudhinda, DGT kudhinda, machira, kupisa kupisa kudhinda, noctilucent kudhinda, sirivheri / goridhe inopisa chitambi kudhinda, offset kudhinda, kudhinda kwemvura.
Iwe unogona kusarudza imwe kana dzimwe nzira dzokudhinda kuti yako T-shati ive yefashoni.
Iwe unotumira dhizaini yedu kwatiri uye isu tichaiprinta zvinoenderana nechikumbiro chako, Kana iwe usingazive maitiro ekugadzira T-shati dhizaini, unogona kutitumira logo yako kana zano, uye mugadziri wedu anogona kupedzisa dhizaini yako.
Isu tinopa yakasarudzika chitaridzi uye tag basa, kugadzira T-shirts neyako brand.
Tinogamuchira kubvunza kubva kumativi ese epasi, hapana maodha ari madiki uye hapana maodha akanyanya.
Pashure: Wholesale Vakadzi Vemafashoni Yemahara Logo Dhinda Shirt Vakadzi Zhizha Plain Crop Tops
Zvadaro: Wholesale Tsika Yemavara Dhinda Yekukurumidza Kuomesa Polo Shirt
Wholesale Tsika Yemavara Dhinda Yekukurumidza Kuomesa Polo Shirt
Goridhe Pfeka juzi revarume Male Polo Shirt Sh ...
Best yepamusoro Wholesale mitambo sublimation chikwata ...
Cotton bani mukusimbisa muviri kusimba vesti S ...
Cotton pfupi ruoko hembe zvakajairwa oversize t s ...
Wholesale inokurumidza yakaoma polyester shati yemarati ...